Jamie Carragher oo fariin digniin ah u diray Klopp kaddib barbarihii ay Liverpool la gashay West Bromwich – Gool FM
Jamie Carragher oo fariin digniin ah u diray Klopp kaddib barbarihii ay Liverpool la gashay West Bromwich
Dajiye December 28, 2020
(Liverpool) 28 Dis 2020. Halyeeyga kooxda Liverpool iyo xulka qaranka England ee Jamie Carragher ayaa ka hadlay barbarihii ay xalay Reds la gashay naadiga West Bromwich.
Kooxaha Liverpool iyo West Bromwich ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Anfield, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 1-1 ah, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Ingiriiska.
Inta uu kulanka socday ayaa lagu arkay dhaawac soo gaaray daafaca reer Cameroon ee Joel Matip, waxayna xaaladan ay sii adkeeysay dhibaatada dhanka daafaca ka heysata tababare Jürgen Klopp, maadaama ay horey dhaawacyo uga maqnaayeen Virgil van Dijk iyo Joe Gomez.
Wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday fariin uu Jamie Carragher u diray tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp, wuxuuna yiri;
“Dhaawacan waa walaac weyn, laakiin ma ahan wax cusub, waxay muhiim u tahay kooxda inay lasoo saxiixato daafac bisha Janaayo ”.
“Weli waxaan ku qanacsanahay in Liverpool ay tahay kooxda ugu fiican horyaalkan, xitaa la’aanta Virgil van Dijk, waxaana qabaa in dadka intiisa badan ay u tixgelin doonaan kooxda inay u sharaxan tahay ku guuleysiga tartanka.”
“Waxaan qabaa in wadada kaliya aysan ugu guuleysan Karin ay tahay dhibaatada ka heysata dhanka daafaca.”
“Waan ogahay booskaas oo aan horey uga soo ciyaaray, ma ahan boos loogu talagalay ciyaartoyda da’ayarta ah, mar uunna qaladaad ayey sameyn doonaan, sababtoo ah waa ciyaartoy da’ ayar ah, wali wax ayeey baranayaan.”
Messi oo si cajiib ah kaga hadlay suurtagalnimada uu Neymar Jr ugu soo laaban karo kooxda Barcelona
“Cristiano Ronaldo waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka” – Lionel Messi